Tahaka izao izany Paska (sy ny tsirony) ao Trinite & Tobago izany · Global Voices teny Malagasy
Feno loko sy hanitra ity fotoana iray amin'ny taona ity
Voadika ny 15 Avrily 2019 6:20 GMT
Vakio amin'ny teny नेपाली, Italiano, Shqip, Français, Español, 日本語, English
Mitsatoka ao anatin'ny fotoana maina — izay midika hoe tian'ireo “fotsy varavarana” ny manao zavatra ivelan'ny trano handaniany ny fotoana — ny fetin'ny paska ao Trinite sy Tobago. Indreto ny topimaso amin'ny sasantsasany amin'izy ireny, sy ireo fomban-drazana hafa fankalaza mamaritra izany hoe Paska izany ao amin'ity firenena nosy-kambana ity.
Izao no fotoana ao anatin'ny taona mamelana tanteraka ny hazo Tabebuia (na Poui araka ny amantarana azy ao an-toerana) ka mandravaka ny tendrombohitra sy ny morondalana amin'ny voninkazony mavomavo mahatalanjona. Misy ireo andiana Poui mamony voninkazo mavokely, mampahatsiahy ny famelan'ny voaroy ao Japan. Tsy maninona izay lokony, fa mampifoka rivotra hatrany ny fahitana ny famelan'ny hazo Poui tanteraka, ary isa-taona ny mpisera media sosialy mizara ny pikantsariny ao amin'ny Facebook sy Instagram. Tahaka ny hoe tsy Paska raga vai tsy mahita ity fahalavorarian'ny hazo Poui ity!
Mafilotra hatrany izy ity amin'ny fotoana rehetra mandritra ny taona, saingy mamelombelona aina tanteraka kosa manodidina ny Paska ny fitambaran'ny gilasy, sirô, sy ireo hanitra isan-karazany ary (matetika) misy ronono mandry. Fandehanan'ny mpivarotra amin'izany ireo tora-pasika amorondrano malaza sy ny Queen's Park Savannah (sehatra maitson'ny renivohitra) hisintonana izay mety ho mpanjifa amin'izany.
Tarazom-bahoaka isaky ny Paska ihany koa ny filalaovana papangohazo, izay isian'ny fifaninanana fanao isan-taona mandritra ny alahadin'ny Paska ao amin'ny Queen's Park Savannah.
Tsy feno tsara ny maha-paska ny Paska raha vao tsy misy fikarakarana manokana ny “petits pains” (mofo efajoro). Raha lazaina ny anara-pivavahana, dia betsaka no kristiana ny mponina ao Trinite sy Tobago, ary tarazo hatry ny ela ny mihinana ny mofo efajoro mandritra ny Zoma Masina.